Vertex စျေး - အွန်လိုင်း VTX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Vertex (VTX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Vertex (VTX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Vertex ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
VTX – Vertex
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Vertex တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Vertex များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VertexVTX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000352VertexVTX သို့ ယူရိုEUR€0.000296VertexVTX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000268VertexVTX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00032VertexVTX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00316VertexVTX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00221VertexVTX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0078VertexVTX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00131VertexVTX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000468VertexVTX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000486VertexVTX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00788VertexVTX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00272VertexVTX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00187VertexVTX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0263VertexVTX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0593VertexVTX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000481VertexVTX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000526VertexVTX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0109VertexVTX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00244VertexVTX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0371VertexVTX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.416VertexVTX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.133VertexVTX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0257VertexVTX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00974
VertexVTX သို့ BitcoinBTC0.00000003 VertexVTX သို့ EthereumETH0.0000009 VertexVTX သို့ LitecoinLTC0.000006 VertexVTX သို့ DigitalCashDASH0.000004 VertexVTX သို့ MoneroXMR0.000004 VertexVTX သို့ NxtNXT0.0251 VertexVTX သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 VertexVTX သို့ DogecoinDOGE0.0991 VertexVTX သို့ ZCashZEC0.000004 VertexVTX သို့ BitsharesBTS0.0136 VertexVTX သို့ DigiByteDGB0.0128 VertexVTX သို့ RippleXRP0.00116 VertexVTX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 VertexVTX သို့ PeerCoinPPC0.00124 VertexVTX သို့ CraigsCoinCRAIG0.157 VertexVTX သို့ BitstakeXBS0.0147 VertexVTX သို့ PayCoinXPY0.00602 VertexVTX သို့ ProsperCoinPRC0.0433 VertexVTX သို့ YbCoinYBC0.0000002 VertexVTX သို့ DarkKushDANK0.111 VertexVTX သို့ GiveCoinGIVE0.746 VertexVTX သို့ KoboCoinKOBO0.0772 VertexVTX သို့ DarkTokenDT0.000324 VertexVTX သို့ CETUS CoinCETI0.995